Okufanele Kwenziwe Nokungafanele Ukwenziwa Kwentengiso Ngeholide Ngokwe-99designs | Martech Zone
Ubusuku buthule, ama-dreidel ayoma, futhi amakhasimende akho avula izikhwama zawo zemali. Uma ungenza uhlobo lomkhiqizo wakho lube yingxenye yesikhathi sabo samaholide ngendlela engokwemvelo nenhle, bazokukhumbula kahle uze ungene onyakeni omusha. Nawa ama-Do's and Don'ts awusizo wokukusiza ukuthi uzulazule kusizini.
Yenza: gcina ubuqiniso bakho
Uma ukusakaza kwakho okujwayelekile kwezokuxhumana kuqukethe amahlaya amabi, ukuthumela imiyalezo ethunyelwe egcwele isasasa lamaholide kuzogadla izethameli zakho njengokungajwayelekile. Gcina umkhiqizo wakho engqondweni njengoba ugcina amaholide. Slip puns kumakhadi akho eholide uma ujwayele ukuxhumana namahlaya. Futhi uma ugcina ithoni yenkampani ebucayi unyaka wonke, namathela emibonweni eqotho noma kumahlaya alinganiselwe ku-G ezintweni zakho zeholide.
Musa: shiya noma ngubani ngaphandle
Ngaphandle kwalokho ongakholelwa yiHallmark, akubona bonke abantu abagubha uKhisimusi. Ngokuvumelana ne I-Pew Research, Amaphesenti angama-92 aseMelika agcina leli holide. Ngaphandle kokuthi umkhiqizo wakho usekelwe okholweni, gcina ukumaketha kwakho kwamaholide ngokujwayelekile ukuze ukhange amaphesenti ayi-100 ezethameli zakho. Khangisa "ukuthengiswa kwamaholide" kunokuthi "ukuthengiswa kukaKhisimusi," thumela amakhadi amemezela "Konke Okujabulisayo" futhi uthumele imiyalezo eziteshini zakho zokuxhumana ugubha iholide ngalinye lasebusika njengoba lifika.
Ukunikela ngesihle kuzuzisa i-karma yakho kanye nomugqa wakho ophansi. Kuyindlela yokubeka igama lakho emphakathini wakho futhi wenze abasebenzi bakho bazizwe bejabule ngokusebenzela inkampani ehloniphekile.
Ungafaki noma yikuphi ukukhangisa okusobala noma izindawo zokuthengisa emizameni yakho yokunikeza iholide; itacky futhi esobala. Kepha ungathola izindlela zokubopha umthungo wakho ngaphandle komthungo ekunikeleni kwakho ngesihle. Isibonelo, i-graph firm ingahlinzeka ku- ukuklama nokuphrinta izinhlelo emicimbini yamaholide omphakathi wendawo noma ukuqhuba umncintiswano wendatshana oklomelisa izinsizakalo zamahhala zokwakhiwa kwamawebhusayithi kosomabhizinisi abasebenzayo.
Futhi faka abasebenzi bakho babandakanyeke! Cela imibono yabo yezindlela zokusiza umphakathi ngalesi sikhathi samaholide. Ungathatha imindeni eswele yendawo futhi ubanikeze izipho nokudla, noma unikeze abasebenzi usuku olukhokhelwayo ukuze bachithe izipho zokugoqa izinhlangano ezisiza umphakathi ezisatshalaliswa.
Musa: yeqa ngokweqile
Ukutubeka ngamaholide kungokoqobo. Abantu abaningi bazizwa bekhungathekile futhi bekhathele njengoba uDisemba emasha. Ungafaki amakhasimende akho izikhumbuzo ze-imeyili noma ubuze abasebenzi bakho ukuthi badele njalo ngoMgqibelo ukuze basebenze emikhankasweni yakho yokusiza. Futhi ngakho konke okungcwele, ungenzi abasebenzi bakho basebenze sekwephuzile ngoKhisimusi noma ngo-Eva Wonyaka Omusha uma ungakusiza. Ingxenye yempumelelo yenkampani yakho incike ekugcineni abasebenzi abahle bejabule.
Yenza: thumela amakhadi wangempela
Njengoba iposi lomnenke lihamba ngendlela yama-dinosaurs, ukuthumela amakhadi wangempela kukunikeza ithuba lokugqama epakethe futhi wenze ukumaketha okuncane. Dala ikhadi le-pop-up, faka iphazili yamagama eveza umlayezo weholide noma uhlanganise ikholaji enhle yezingane zabasebenzi nezilwane ezifuywayo ezigqoke izigqoko zeholide. Ubuciko a umyalezo othize mayelana namakhasimende akho nebhizinisi lakho, noma nikeza okuthile izethameli zakho ezingakusebenzisa. Faka isigqebhezana esihle ngoJanuwari noma uzibuthe ohlukile wefriji.
Musa: yenza umcimbi okhubazekile
Uma uqhuba ibhizinisi lomuntu oyedwa, njalo ebusuku kungaba yiphathi lakho lehhovisi leholide. Kepha ngeqembu elikhulu, ukuphonsa umcimbi weholide kungasiza ekuqiniseni isimilo seqembu - uma nje abantu befuna ukuya. Hlela umsebenzi ongajwayelekile, njengomdlalo we-laser tag game noma i-bowling. Uma wonke umuntu eqenjini lakho ethanda ukuphuza, hamba uye endaweni okwenziwa kuyo utshwala noma ewayinini. Vele uqiniseke ukuthi abantu abangafuni ukubamba iqhaza kulo msebenzi basengaya futhi bazijabulise.
Uma isabelomali sakho singavumela kuphela i-bash yegumbi lekhefu, cabanga ukweqa ngokuphelele. Esikhundleni salokho, vumela abasebenzi bakhiphe amahora ambalwa ngaphambi kokujwayelekile bese behambisa amakhadi wesipho sokudlela. Labo abafuna ukuya bayodla ngaphandle ndawonye, ​​kanti abanye bangajabulela isikhathi sokuphumula.
Ngabe usazimisele ngokubamba iphathi yehhovisi lendabuko? Kuhlele ngoLwesihlanu kusihlwa ngasekuqaleni kukaDisemba. Amaphathi waphakathi nesonto kunzima ukuphatha abazali abamatasa, futhi abasebenzi bangaba nezinye izinhlelo njengoba ukuphela kwenyanga kusondela.
Yenza: gqoka indawo yakho
Njenge-Whos ezansi e-Whoville, khipha imihlobiso yakho ngokugcwele. Ungase umangale ukuthi kuzokwamukeleka kakhulu kangakanani ukwamukela ihhovisi elithile le-drab ngemicu embalwa yezibani ezibenyezelayo, ezinye izitshalo ezimibalabala, ikhandlela eliwukhuni namakhekheba eqhwa acwebezelayo asakazeka.
Uzibuza ukuthi kungani uzikhathaza ngokuhlobisa uma amakhasimende angavamile ukuza ehhovisi lakho? Thumela izithombe zemihlobiso yakho eziteshini zakho zemidiya yezenhlalo ukukhombisa umoya wakho wokujabula. Ungathola futhi ukuthi izethameli zakho zize kuwe ngokuhlela ukudla, okokugqoka noma ukushayela izipho. Nikeza amakhuphoni amancane noma ezinye izinzuzo ngokushintshisana ngokudonswa kweminikelo Abasebenzi bakho bangaphatha ukufakwa nokudilivwa kweminikelo, futhi uma amakhasimende engena, azothandeka ngemihlobiso yakho futhi angabheka okwesibili izinsizakalo ongazinikeza.
I-caveat eyodwa: Ngaphandle kokuthi usebenzise insizakalo yokwenza umentshisi, i-mistletoe ayinandawo ehhovisi.
Tags: okumele ukwenze nokungafanele ukwenzeiholideamakhadi eholideiphathi yeholide